China Combustion Fan ụlọ ọrụ na-emepụta | Juda
Fan ngwaọrụ bụ iji hụ na ọkọnọ nke oxygen na arụ orụ di mkpa nke combustion.It nwere bụrụkwa ọrụ ka mma mmepụta, mkpụrụ, unyi zuru combustion.
11. Usoro ikuku
N'oge a, ọtụtụ kilik lime na-enye ikuku na ala, nke anaghị ekesa, na-enwekarị nsogbu nke ọkụ ọkụ, mmịpụta isi, coking na nchacha mmanụ. Ifufe dị elu nke ikuku ọkụ anyị pụrụ iche na-ebili na mpaghara calcining site na mpaghara jụrụ oyi na ala nke kiln ahụ. Mpaghara jụrụ oyi bụ n'ezie mpaghara mgbanwe mgbanwe okpomọkụ. Ọnọdụ okpomọkụ nke wayo na-ada nke ọma mgbe ikuku dị elu na-eji wayo dị elu. Mgbe ikpo ọkụ na oyi na-atụ, a na-eweghachi okpomọkụ na mpaghara mgbatị ahụ, a na-eme ka nzu wapụtara n'okpuru 80 ℃ iji nweta ihe a chọrọ nke okpomọkụ ash.
Uru nke akụrụngwa: na mpaghara ikuku dị jụụ na ikuku ikuku, dịka nrụgide a setịpụrụ, olu ikuku na usoro nlekota ọkụ iji dozie ikuku oxygen na kiln ahụ, iji nweta nsonaazụ nke ịhazi usoro ịhazi ahụ, ọ bụghị naanị dozie nsogbu nke nsị nke anụ ahụ, coking, nhichapu ihe, mgbapụta, nsure zuru oke na ihe na-esite na gas, iji mee ka usoro mmepụta ahụ kwụsie ike ma melite nkwụsi ike na mmepụta nke mmepụta.
Wayo n'ekwú ikuku ọkọnọ na onye ofufe oke
N'agbanyeghi oku oku ma obu oku oku, o choro ikuku nke oma, n'ihi na oku obula aghaghi inwe onodu ato, ya bu mmanu, ikuku (oxygen), na oku oku. Na-enweghị ọnọdụ ọ bụla, ọ gaghị ere ọkụ.Ma, a na-agbakọ ego ikuku ahụ dabere na ikuku oxygen nke ọkụ ọkụ na-ere ọkụ, ọ bụghị oke ma ọ bụ obere .Ọ bụrụ na ịhapụ ikuku dị oke ka ọkụ ọkụ, ọtụtụ ọkụ ga-abụ wepụrụ. Ọ bụrụ na ikuku ikuku dị obere, mmanụ ọkụ agaghị agba ọkụ kpamkpam, na-ebute ngwangwa nke mpaghara mpaghara mpaghara na nsị nke ume. Naanị ikuku ikuku nwere ezi mmetụta nwere ike ịnwe mmetụta dị mma ma mezuo ebumnuche nke ịchekwa ike. A na-agbakọ ya dịka usoro ndị a si dị: (ewepụ ya na usoro ngụkọta oge) nrụgide ya kwesịrị ịgbakọ dịka nguzogide dị iche iche nke ụdị oku dị iche iche na ihe dị iche iche dị iche iche. kọlụm / irè ịdị elu (m) usoro iji gbakọọ.Ma oke ọka nke mmanụ ọkụ dị iche iche.N'ihi ya, a ga-ahọrọ onye ofufe ahụ dabere na ngụkọta oge yana dabere na ụdị ọkụ ọkụ na ahụmịhe bara uru ， Nwere ike inwe ezigbo jiri mmetụta.
Nke gara aga: Mgbakọ Usoro Nchekwa
Osote: Mkpọchi mkpọchi agba abụọ
2. nnyefe Belt ebu ebu, dị ka a n'ozuzu akụrụngwa maka adigide njem, na ọtụtụ-eji ulo oru mmepụta na bụ otu n'ime ndị nkịtị erute ngwá. Uru nke iji ihe mkpuchi belt n'okpuru ala iji na-ebugharị igwe akụrụngwa bụ na ọ na-ebelata mmetọ nke ájá na mkpọtụ, na-agbaso ihe iwu nke iwu nchekwa gburugburu ebe obibi chọrọ, ọ bara ezigbo uru iji guzobe onyonyo ụlọ ọrụ ma mezuo ọrụ ụlọ ọrụ. Wayo nkume index chọrọ ...
Calcium hydroxide Production Line akụrụngwa, Calcium hydroxide akụrụngwa, Aha Azụmaahịa nke Calcium Oxide, Calcium oxide na Calcium hydroxide, Ime Calcium hydroxide, Calcium Hydroxide Ime,